जनताले माओवादीलाई नै विश्वास गर्नेछन् : मणिराम बुढाथोकी, - Everest Dainik - News from Nepal
जनताले माओवादीलाई नै विश्वास गर्नेछन् : मणिराम बुढाथोकी,
काठमाडौं । २०४७ सालदेखि संयुक्त जनमोर्चाबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका सुनिलस्मृति गाउँपालिका वडा नं. ५ रिझाका स्थायी बासिन्दा मणिराम बुढाथोकी यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
राजनीतिमा आउनु अघि शिक्षण पेशामा आवद्ध उहाँ तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको षड्यन्त्रका कारण अर्धभूमिगत बन्नुपरेको थियो । सोही क्रममा शिक्षण पेशा छोडी राजनीतिमा होमिनुभएको थियो उहाँ। २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बन्नुभएका उहाँ तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यसका प्रमुखहरु सिडिओसँगको रिसिइबीका कारण सरकारी पक्षबाट धरपकड हुने, प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न लगाउने तथा यातना दिने क्रम अत्याधिक बढ्दै जान थाल्यो । राज्यविरुद्ध आवाज उठाउँदा अर्धभूमिगत बन्नुभएका उहाँ जनयुद्ध शुरु भएपछि उहाँ पनि त्यसमै होमिनुभयो।
२०५३ सालमा पक्राउ पर्नुभएका उहाँ ७ वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ । २०५९ सालमा रिहा भएपछि पुनः पार्टीकै सम्पर्कमा आई हालसम्म निरन्तर लागिरहनु भएको छ । अहिले गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँसँग स्थानीय तह निर्वाचनबारे पुष्पा महरासँग गरिएको कुराकानी–
तपाईंले उम्मेदवारी दिनुभएको स्थानीय तहका विशेषता के–के हुन् ?
रोल्पा जिल्ला नै निकै दुर्गम जिल्ला हो । अहिले सुगम भनेर हटाइए पनि हिजो पञ्चायती शासनकालमा यहाँका मानिस बुटवल, भैरहवा, कृष्णनगरबाट नुन चामल बोकेर ल्याई खाने गर्दथ्यौं । नेपालमा कांग्रेस, एमालेले लामो समय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे पनि रोल्पामा भने विकास परिवर्तन भएको थिएन ।
जब २०६२/०६३ पछि माओवादीले सरकार सञ्चालन ग¥यो, विकासले जिल्लाको मुहार फेरिएको छ । बाटो विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, शिक्षालगायत भौतिक र आधारभूत आवश्यकताहरुलाई माओवादी नेतृत्वले पूरा गरिदिएको छ । केही पूरा हुने क्रम जारी छ । सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा पनि यस्तै हो । अघिल्लो नेतृत्वले यस गाउँपालिकामा विकासका धेरै कामहरु गरेका छन् । यहाँका जनताले विकास, समृद्धि र सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
तपाइँका चुनावी एजेण्डाहरु के के छन् ?
पार्टीका एजेण्डा, हामी विकास निर्माणका कामहरु गर्दैछौं । अघिल्लो पटक पनि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्दा सुनिलस्मृति गाउँपालिका उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल बनेको थियो । त्यतिबेला केही पूरा भए, केही जग बसाल्ने काम मात्रै भएका छन्, तिनलाई पूरा गर्नु नै हाम्रो मुख्य एजेण्डा रहेको छ ।
यातायातको विस्तार, खानेपानी, विजुली, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा स्तरोन्नति गर्दै, अपुग भएका स्थानमा संघ प्रदेशसँग सहकार्य गरी काम गर्ने र सुनिलस्मृति गाउँपालिकालाई थप उँचाइमा पु¥याउने हो ।
तपाईका जितका आधारहरु के के हुन् ?
सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा कुल १७,६२८ मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये २६ सय बढी माओवादी केन्द्रको पूर्णकालीन पार्टी सदस्य (होल टाइमर) हुनुहुन्छ । एक जना मानिसले ३÷४ जना मानिसलाई (कन्भिन्स) गर्न सक्यो भने पनि माओवादी केन्द्रले अत्यधिक मतले विजयी हुनेछन् । त्यस्तै माओवादी नेतृत्वले नै जनताका समस्या र विकासका कामहरु गरेकाले जनताले पनि माओवादीलाई नै विश्वास गर्नेछन् ।
यस गाउँपालिकाका लागि तपाई नै आवश्यक किन ?
पार्टीमा बराबरी हैसियत भएका सहयोद्धा साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ । म सुलिचौर बजारमा बसेँ । यो एउटा नाका पनि हो, त्यसैले म यहाँ भएपछि जनतासँग म अलि बढी नजिक भएँ। जनताको समस्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम गरँे । जनताको सुशासनका पक्षमा सधैँ लडिरहेँ । यसले गर्दा जनताको समस्या हल गर्न सक्ने क्षमता पार्टीले पनि ममा देख्यो होला । त्यसैले मलाई पार्टी केन्द्रले टिकट दियो ।
यस गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?
देशव्यापी मौलाइरहेको भ्रष्टाचार सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा भने खासै देखिएको छैन । जनता पनि सचेत भएको र कर्मचारी पनि इमान्दारीपूर्वक काम गरेकाले यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध पाइँदैन । ‘भ्रष्टाचार म गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने मेरो धारणा छ । यदि मैले नेतृत्व लिए भने पनि म भ्रष्टाचार हुन दिने छैन ।